Apôkrifan' ny Baiboly - Wikipedia
Apôkrifan' ny Baiboly
(tonga teto avy amin'ny Boky apokrifa)
Atao hoe Apôkrifan' ny Baiboly na Boky apôkrifa na Soratra apôkrifa na Apôkrifa fotsiny ireo boky nosoratana ho boky masina nefa tsy voaray ho ao amin' ny lisitry ny boky ekena ho filamatry ny finoana ao amin' ny Baiboly kristiana na amin' ny Baiboly jiosy. Izany lisitra izany no atao hoe kanôna. Tsy mitovy ny fampiasan' ny Katôlika sy ny Prôtestanta ny teny hoe apôkrifa. Samy manana ny lisitry ny boky ataony hoe apôkrifa ny fanontana Baiboly tsirairay.
2 Fampiasana ny teny hoe apôkrifa
2.1 Boky apôkrifa amin' ny Prôtestanta sy ny Jiosy
2.2 Boky ataon' ny Katôlika hoe "apôkrifa"
3 Apôkrifan' ny Testamenta Taloha sy apôkrifa kristiana
3.1 Apôkrifan' ny Testamenta Taloha
3.2 Apôkrifa kristiana
Ny teny hoe apôkrifa dia fanagasiana ny teny grika hoe ἀπόκρυφος / apókruphos izay midika hoe "miafina".
Hoy i Enrico Galbiati: "Sarotra atambatra ho boky iray taloha izany boky maro be izany, sady nisy boky maro hafa koa nolazaina tsy an-drariny hoe boky masina notsilovin' Andriamanitra (nohamboina hoe hita tany an-toera-miafina, ka nantsoina amin' ny anarana grika hoe "apokrifa")" . Ny Prôtestanta malagasy dia mpiasa ny teny hoe apôkryfika koa.
Fampiasana ny teny hoe apôkrifaHanova
Tsy mitovy ny fandraisana sy ny fampiasana ny teny hoe apôkrifa eo amin' ny fiangonana prôtestanta sy ny fivavahana jiosy andaniny ary ny fiangonana katôlika sy ny fiangonana ôrtôdôksa ankilany. Noho izany dia samy manana izay boky ataony hoe "apôkrifa" ny fiangonana tsirairay. Nefa ny hoe "pseodepigrafa" amin' ny Prôtestanta no mitovy amin' ny hoe "apôkrifa" ao amin' ny fiangonana katôlika sy ny fiangonana ôrtôdôksa.
Boky apôkrifa amin' ny Prôtestanta sy ny JiosyHanova
Ataon' ny Prôtestanta hoe apôkrifa ireo boky ao amin' ny Testamenta Taloha hita ao amin' ny Baiboly katôlika sy Baiboly ôrtôdôksa sady atao hoe deoterôkanônika nefa tsy voaray ho kanôna ao amin' ny Baiboly prôtestanta sy ao amin' ny Baiboly hebreo. Ireto avy izy ireo:
Bokin' i Baroka
Fanampin' ny Bokin' i Estera
Bokin' ny Fahendrena
Bokin' ny Ekleziastika na Sirasida
Fanampin' ny Bokin' i Baroka (Toko faha-6 ao amin'ny Bokin'i Baroka).
Fanapin' ny Bokin' i Daniely (Toko faha-13 sy faha-14 ao amin' ny Bokin'i Daniely).
Ny boky nifotorana misy an' ireo "fanampiny" ireo dia tsy hita ao amin' ny Baiboly hebreo ampiasaina amin' izao fotoana izao fa tamin' ny Baiboly amin' ny teny grika atao hoe Septoajinta (na Septanta). Ny boky hafa rehetra, izay sady tsy kanônika no tsy apôkrifa, dia ataon' ny Prôtestanta hoe pseodepigrafa.
Boky ataon' ny Katôlika hoe "apôkrifa"Hanova
Amin' ny Katôlika ny boky atao hoe apôkrifa dia ireo boky sady tsy prôtôkanônika no tsy deoterôkanônika - dia ireo ataon' ny Prôtestanta hoe pseodepigrafa. Ny teny hoe apôkrifa sy pseodepigrafa anefa tsy mitovy hevitra. Tsy misy lisitra raikitra momba ireo boky ireo, nefa ireto misy ohatra vitsy amin' izany:
Boky fahatelon' ny Makabeo
Boky fahefatry ny Makabeo
Salamon' i Salômôna
Ny ankamaroan' ny boky apôkrifa (amin' ny hevitr' io teny io ho an' ny Katôlika sy ny Ortôdôksa) dia omena manaraka eo ambany.
Apôkrifan' ny Testamenta Taloha sy apôkrifa kristianaHanova
Tsy mahatanisa ny boky apôkrifa rehetra ny lisitra omena eto.
Apôkrifan' ny Testamenta TalohaHanova
Ireto boky ireto dia atao hoe koa "Apôkrifa anelanelan' ny Testamenta roa" na "Soratra anelanelan' ny Testamenta roa" noho izy ireo voasoratra tanelanelan' ny fotoana nanoratana ny Testamenta Taloha sy ny an' ny Testamenta Vaovao, teo anelanelan' ny fotoana nahafatesan' ny mpaminany Malakia (toanjato faha-5 eo ho eo) sy ny fotoana nanombohan' i Joany Batista nanao asa faminaniana. Voasoratra tamin' ny fiteny grika sy tamin' ny fiteny hebreo ireo boky apôkrifa ireo.
Andro fahiny ao amin' ny Baiboly "Pseodo-Josefa"
Apôkalipsa grikan’ i Baroka
Apôkalipsin’ i Abrahama
Apôkalipsin’ i Daniela
Apôkalipsin' i Elia
Apôkalipsin’ i Ezekiela
Apôkalipsin' i Ezra (na Apôkalipsan' i Esdrasa = Boky fahefatr' i Ezra na Esdrasa)
Apôkalipsin’ i Mosesy (na Fiainan' i Adama sy Eva)
Apôkalipsin’ i Zefania (na Apôkalipsan' i Sôfônia)
Apôkalipsy siriakan’ i Baroka
Apôkrifan’ ny Genesisy
Apôkalipsin' i Noa (na Nôe)
Boky fahefatr' i Ezra (na Esdrasa)
Fandriky ny Vehivavy
Fanontanian’ i Ezra (na Esdrasa)
Fiakaran' i Mosesy (na Môizy)
Fitsipiky ny Ady
Fitsipiky ny Fikambanana
Fitsipika fanampin’ ny Fikambanana
Fivoasana an’ i Habakoka
Fivoasana ny Salamo
Henoka voalohany (na Henoka etiôpiana)
Henoka faharoa (na Bokin' ny tsiambaratelon’ i Henoka na Henoka slava)
Henoka fahatelo (na Bokin' ny Lapa na Henoka hebreo)
Horonam-bokin’ ny Tempoly
I Josefa sy i Aseneta
Martioran’ i Isaia
Paralipomenan’ i Jeremia
Salamon' i Sôlômôna
Tahirin-tsoratr’ i Damasy (na Damaskosy)
Tantara hebreon’ i Melkisedeka
Tantaran' i Sôlimana
Testamentan’ i Joba
Testamentan’ i Abrahama
Testamentan’ i Isaka
Testamentan’ i Jakoba
Testamentan’ i Jeremia
Testamentan' i Mosesy
Testamentan’ i Sôlômôna
Testamentan' ny Patriarka roa ambin' ny folo (Asera, Benjamina, Dana, Gada, Isakara, Josefa, Jodà, Levy, Neftaly, Robena, Simeôna, Zabolôna)
Adin' i Adama sy i Eva
Antsan’ i Sôlômôna
Apôkalipsin’ i Paoly
Apôkalipsin' i Petera
Apôkalipsy voalohan’ i Jakoba
Apôkalipsy faharoan’ i Jakoba
Apôkalipsy voalohan’ i Joany
Apôkalipsy faharoan’ i Joany
Apôkalipsy fahatelon’ i Joany
Apôkalipsin’ i Sedraka
Apôkalipsin’ ny Eseniana
Asan’ i Andrea
Asan’ i Andrea sy i Matio
Asan’ i Andrea sy i Paoly
Asan’ i Andrea sy i Petera
Asan’ i Barnabe
Asan’ i Filipo
Asan’ i Jakoba
Asan’ i Joany avy any Rôma
Asan’ i Marka
Asan’ i Paoly
Asan’ i Petera
Asan’ i Petera sy i Paolin’ i Pseodô-Markelôsy
Asan’ i Petera sy ny Apôstôly roa ambin’ ny folo
Asan’ i Pilato (na Evanjelin' i Nikôdemôsy)
Asan’ i Stefana (na Asan' i Etiena)
Asan’ i Tadeo
Asan’ i Timôty
Asan’ i Tito (na Titosy)
Asan’ i Tômasy (na Tômà)
Bokin’ ny Fanambaràn’i Elkasay
Bokin’ i Tômasy (na Tômà)
Bokin' ny Fahaterahan' i Maria
Bokin’ ny Fitsanganan-ko velon’ i Jesoa Kristy araka ny Apôstôly Bartelemy
Epistily ho an’ i Lentolosy
Epistilin’ i Petera ho an’ i Filipo
Epistilin’ ny Apôstôly
Epistily ho an’ ny Laôdikeana
Esdrasa fahadimy (na Ezra fahadimy)
Esdrasa fahenina (na Ezra fahenina)
Evanjelin' i Barnabe
Evanjelin’ i Bartelemy (na Fanontanian’ i Bartelemy)
Evanjelin’ i Gamaliela
Evanjelin’ i Jodasy
Evanjelin' i Maria
Evanjelin' i Petera
Evanjelin' i Pseodô-Matio
Evanjely apôkrifan’ i Joany
Evanjely arabon’ i Joany
Evanjely arabon' ny Fahazazana
Evanjelin’ i Filipo
Evanjely araka an’ i Tômasy
Evanjely armenianan' ny Fahazazana
Evanjely miafin’ i Marka
Fampianaran’ ny Apôstôly Aday
Fanangonana J-n'ny Fahazazana
Fanekena an’ i Pseodô-Klemento
Fiainan’ i Jesoa amin’ ny fiteny arabo
Fiakaran' i Isaia
Fiakaran' i Maria
Fiderana an’ i Joany mpanao Batisa
Fifandraisan' i Paoly amin’ ny Kôrintiana
Fifandraisan' i Paoly sy i Seneka
Prôtevanjelin' i Jakoba
Pseodô-Abdiasa (Virtutes Apostolorum)
Tantaran’ i Jôsefa mpandrafitra
Tantaran’ i Simôna sy i Teonoe
Tantaran' ny Fahazazan' i Jesoa (na Evanjelin' ny Fahazazana araka an' i Tômasy)
Tantaran' ny Virjiny
Taratasin’ i Jesoa Kristy ny amin’ ny Alahady
Testamentan’ ny Tompo
Torimason' i Maria nosoratan' i Pseodô-Joany
Toritenin' i Pseodô-Klemento
↑ Enrico Galbiati, Tantaran'ny Famonjena amin'ny Testamenta Taloha, Edisiôna md. Paoly / Filles de St Paul / Antananarivo, 1995. Takila faha-12.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apôkrifan%27_ny_Baiboly&oldid=1013413"
Dernière modification le 4 Aogositra 2021, à 10:59
Voaova farany tamin'ny 4 Aogositra 2021 amin'ny 10:59 ity pejy ity.